Ciidamo lageeyey Dhuusamareeb, xili la xalinaayo tabashada
Ciidamo lageyey Dhuusamareeb, xili la xalinaayo tabashada
Dowladda Federaalka Soomaaliya ayaa Ciidamo horleh waxa ay Isniinta maanta ah ka dejisay Dhuusamareeb ee Caasimada dowlad goboleedka Galmudug ee Bartamaha Soomaaliya.
Ciidamada oo lagu sheegay booliska sida gaarka ah u tababaran ee Haramcad ayaa diyaarad looga qaadey Muqdisho, caasimadda Soomaaliya, waxaana tirada cusub lagu sheegay 50-askari oo ka tirsan Ciidanka Dowlada Turkigu u tababartay Soomaaliya.
Saraakiisha amaanka Dowlada Soomaaliya ee ku sugan Dhuusamareeb ayaa saxafadda u sheegay in sababta ciidankan cusub loo geeyay xarunta Maamulka Galmudug ay tahey sarre u qaado amniga magaaladda oo muddooyinkii dambe uu ka taagnaa Khilaaf siyaasadeed.
Ururka Ahlu Sunna oo qayb ka maamula magaaladda illaa iyo haatan wax war ah kama soo saarin daabulitaanka Ciidankaan Maanta lageeyay Dhuusamareeb.
Sida ay saxafadda u sheegeen Xubno ka tirsan Dowlada Soomaaliya iyo Ahlusunna beesha Caalamka ayaa soo faragalisay Khilaafka Siyaasadeed ee u dhexeeya Dhinacyadaan isku haya dhismaha Maamulka Galmudug oo inta badan waqtigiisa ku soo qaatay Khilaaf siyaasadeed tan iyo markii Cadaado lagu soo dhisay sanadkii 2015-tii.
Faragalinta Beesha Caalamka oo soo dadajisay Wadahadal dhexmaray labada dhinac ayaa lagu soo waramayaa in isku afgartay:
1:- In Gudiyada labada dhinac ay magacaabeen ee doorashooyinka ay shaqada joojiyaan inta la isku imaanayo,xalna laga gaarayo tabashada ay qabaan Ahlusunna.
2:- In Wasiirka 1 aad ee Xukumada Soomaaliya Xasan Cali Kheyre uu tago Dhusamareeb si uu u xaliyo xurgufta ka dhalatay Magacaabista Gudiyada doorashooyinka Galmudug ee labada dhinac kala Magacaabeen.
Sidoo kale Ahlusunna ayaa loo soo jeediyay in ay ka fogaadaan wax walba oo caqabad ku noqo kara Dhismaha Maamulka Khilaafku daashay ee Galmudug.
Madaxa Xukuumadda Galmudug, kana mid Masuuliyiinta ugu sarreeya Ahlu Sunna, Sheekh Maxamed Shaakir Cali Xasan, oo la hadlay BBC-da ayaa sheegay in aysan jirin dhul laga qabsaday, wuxuuna sheegay in ciidamadii isku dhafka ahaa ee horey loogu heshiiyay ay wali joogaan magaalada Dhuusamareeb.
“Arrinkaasi wax ka jira malahan. Deegaannadaasi uma baahna in dadkii xoreeyay haddana la niyaysto in laga xoreeyo. Marka, arrintaasina wadahadal ayay ku jirtaa,” ayuu yiri Sheekh Shaakir.
Shaakir ayaa daboolka ka qaadey in maamulkiisa uusan diyaar u ahayn dagaal ay la galaan dowladda oo u muuqata “mid ku gacan-sareysa haatan dhaqdhaqaaqa ciidan ee degaanada Galmudug”.
Sheekha Shaakir ayaa meesha Ka saaray in Ahlusunna laga qabsaday degmooyinka ay maamulaan Galmudug,waxa uuna sheegay in Ciidanka dhaq dhaqaaqa Ciidan wada ay yihiin kuwii Ahlusunna iyo Dowlada oo loo xilsaaray Nabad galyada deegaanada Galmudug.
Todobaadkan, ciidamo uu horkacayo, wasiirka arimaha Gudaha Soomaaliya Cabdi Maxamed Sabriye, ayaa cagta mariyey dagaalamayaasha Ahlu Sunna kalana wareegay magaalooyinka Guriceel iyo Matabaan, oo dowladdu maamusho haatan,waxaana saraakiil ka tirsan Ahlusunna sheegeen in sheekh Shaakir ku amray in aysan Dowlada Soomaaliya Xabad ku ridi karin.
Tallaabooyinka ay xilligan qaaday Dowladda Federaalka ayaa la rumeysan yahay in ay ka dambeeyeen, markii ay Ahlu Sunna soo xir xirtay wado kasta oo horey loogu dhaqaajin karay dhismaha Galmudug-ta cusub.
Ahlu Sunada Galmudug ayaa aad loogu dhaliilay in ay sharuudo ku xirtay dhismaha maamulka cusub, isla-markaana uu ujeedkeedu ahaa in ay kala dhantaasho awood qaybisiga beelaha ee xubnaha maamulka.
Dhawaan ayay ahayd markii wasiirka Wrrimaha Gudaha iyo Federaalka Soomaaliya Cabdi Maxamed Sabriye ku eedeeyay Ahlusunna in uu caqabad ku hayay hannaanka maamul dhiska ee gobolkaasi.
Dowladda Federaalka Soomaaliya ayaa in muddo ah culeys kala kulmeesay maamul dhisida Galmudug,waxaana Khilaafka ugu badan kala dhexeeyaa Ahlusunna oo la aaminsanyahay in awoodoodii hore ay meesha ka baxday ka dib markii ay Ciidankoodii ku wareejiyeen Dowlada Soomaaliya.